New iOS & Android Games, Weekly – REDPlayer
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ စောင့်ရကျိုးနပ်တဲ့ဂိမ်း တစ်ခု နှစ်ခုလောက်ပါတော့ နည်းနည်းတော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲ။ အရင်တစ်ပတ်ကတော့ မရေးဖြစ်လိုက်ဘူး။ Enjoy…
Android အတွက်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်လောက်ကတည်းက soft launch ထွက်ရှိခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ iOS သမားတွေအတွက်ကတော့ ခုတစ်ခေါက်မှာပါလာတယ်ဆိုပါတော့။ freemium ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆော့ဖို့ တန်မတန် အချိန်ကုန်ရကျိုး နပ်မလားကတော့ ကိုယ်က ဇာတ်လမ်းသွားကိုဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတဲ့ အပေါ်ပဲမူတည်မယ်ထင်ပါတယ်။ Character creation တွေမှာ ဇာတ်လမ်းတွေအများကြိးခွဲထွက်သွားနိုင်တာကတော့ အားရစရာပါ။ day-to-day ကိစ္စတွေကတော့ အရင်အတိုင်းမပြောင်းလဲဘူးပေါ့။ task completion တစ်ခုတိုင်းမှာ တစ်ခြား ပစ္စည်းတွေနဲ့ option တွေ unlock ရလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် freemium ဖြစ်တာက အားနည်းချက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သွားရင်လာရင်း အဆင်ပြေလာမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ graphic ကလည်း ok ပါ။ အိမ်ပြင်ဆင်ရာမှာလည်း control အတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခုပဲ …. freemium ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။
VILLAGERS & HEROES: Starfall
တစ်ချို့ကတော့ 2015 July လောက်ကတည်းက ဆော့ဖြစ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါလ်ိမ့်မယ်။ အဲ့တုန်းကတော့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာမရနိုင်သေးပါဘူး။ ကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ cross-platform ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သွားသွားဆော့လို့ရနေမှာပါ။ PC steam မှာရော mobile မှာရောရနိုင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ villager တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ အကောင်တွေမွေး အပင်တွေစိုက်နေလည်းရပြီးတော့ နောက်တစ်ဘဝကတော့ hero တစ်ယောက်အဖြစ် monster တွေနဲ့ခုတ်ထစ်နေရမှာပါ။ ဒီလိုပုံစံတူဂိမ်းတွေက အခုမှရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ 2011 လောက်ကတည်းက MMO တွေမှာ တစ်ခြားနာမည်တွေနဲ့ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မအောင်မြင်ပဲ ရပ်သွားကြတာများလို့ သတိမထားမိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် server ကဝေးတဲ့အတွက် မဆော့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို fantasy MMO တွေထဲမှာတော့ development circle အဆင်ပြေတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ free to play ဖြစ်ပါတယ်။ mount, armor နဲ့ တစ်ခြားပစ္စည်းတွေအများကြီးကို crown နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် MMO တစ်ခုအနေနဲ့တော့ crown ဝယ်ရတဲ့ဈေးက များနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
[Appstore] [Play Store]
BAULDER’S GATE SIEGE OF DRAGONSPEAR
စောင့်ရကြိုးနပ်တဲ့ ဂိမ်းတွေထဲမှာတော့ Siege of Dragonspear ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ Beamdog ကထုတ်တဲ့ Balduer’s Gate series တွေထဲမှာ တစ်ခုမှစိတ်ပျက်စရာမပါပါဘူး။ အခုဆိုရင် PC ရော mobile device တွေမှာပါရလာတဲ့အခါ အချိန်နေရာမရွေး save game ရနေပါပြီ။ $10 နဲ့ 2.6GB+ ဆိုပေမယ့် cross-platform ရတဲ့ RPG ကောင်းတစ်ခုအတွက်ကတော့ တန်ပါတယ်။
Xigma game ကထုတ်လိုက်တဲ့ ဒီဂိမ်းက ယှဉ်ပြောလို့ရတဲ့ ဂိမ်းတွေအများကြီးပဲ။ Alto’s Adventure, Monument Valley, and Prune ဒါတွေကတူတယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ တကယ်ကစားကြည့်တဲ့ အခါသိလာပါလိမ့်မယ်။ survival နဲ့ construction တွဲထားတဲ့ဂိမ်းတွေထဲမှာတော့ ငြိမ်ဆေးမိထားတဲ့ အတိုင်းဆော့ဖြစ်နေမယ့်ဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ $4 နဲ့ MB နည်းနည်းပဲဆိုတော့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို စုပြီး ကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်မလား အကောင်တွေကို သေချာ assign လုပ်မလားက hi-score ရဖို့ နည်းတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ Steam မှာလည်းရပါတယ်။ PC platform အတွက်ပေါ့။ Android အတွက်တော့ မတွေ့ဘူး။
Gacha game လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။ Social RPG ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ Square Enix နဲ့ Nintendo တို့လိုအကိတ်တွေရဲ့ SRPG တွေခေတ်ထလာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ဂိမ်းအသစ်တွေ ကိုဆော့ဖြစ်ဖို့နဲ့ တိုးဝင်ဖို့ဆိုတာ အတော်လေးခက်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ dev တွေဘက်ကကြည့်ရင်းပြောတာပါ။ ဒီတစ်ခုက idea အသစ်တွေနဲ့ပြည့်နေတာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူလိုငါလိုပါပဲ။ graphic လည်း ခုအချိန်မှာဒီလောက်တော့ ရှိသင့်ပါပြီ။ Storyline ကတော့ တကယ်ရေးထားတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် မျက်စိနောက်အောင်လုပ်ထားတော့ နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါ next ပဲနှိပ်ဖို့ကြိုးစားမိလာတာတော့အမှန်ပဲ။ Single-player campaign တွေတက်လာတာနဲ့အမျှ တစ်ခြား game mode တွေထပ်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ PvP ရှိတယ်။ ခေတ်ထနေတဲ့ copy character လည်းပါပါတယ်။ energy, evolve, draw, box ဆိုတဲ့ gacha game တွေရဲ့ကိစ္စ အကုန်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ f2p ဆိုတော့ အချိန်ရရင်တော့ စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ၊ အများစုလည်း သိပ်ခရီးမရောက်ကြသေးပါဘူး။
ဒီတဈပတျကတော့ စောငျ့ရကြိုးနပျတဲ့ဂိမျး တဈခု နှဈခုလောကျပါတော့ နညျးနညျးတော့ အဆငျပွမေယျထငျတာပဲ။ အရငျတဈပတျကတော့ မရေးဖွဈလိုကျဘူး။ Enjoy…
Android အတှကျကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ ၁နှဈလောကျကတညျးက soft launch ထှကျရှိခဲ့ပွီးသား ဖွဈပါတယျ။ iOS သမားတှအေတှကျကတော့ ခုတဈခေါကျမှာပါလာတယျဆိုပါတော့။ freemium ဖွဈတဲ့အတှကျ ဆော့ဖို့ တနျမတနျ အခြိနျကုနျရကြိုး နပျမလားကတော့ ကိုယျက ဇာတျလမျးသှားကိုဘယျလောကျစိတျဝငျစားလဲဆိုတဲ့ အပျေါပဲမူတညျမယျထငျပါတယျ။ Character creation တှမှော ဇာတျလမျးတှအေမြားကွိးခှဲထှကျသှားနိုငျတာကတော့ အားရစရာပါ။ day-to-day ကိစ်စတှကေတော့ အရငျအတိုငျးမပွောငျးလဲဘူးပေါ့။ task completion တဈခုတိုငျးမှာ တဈခွား ပစ်စညျးတှနေဲ့ option တှေ unlock ရလာမှာဖွဈတဲ့အတှကျ freemium ဖွဈတာက အားနညျးခကျြတဈခုတော့မဟုတျပါဘူး။ သှားရငျလာရငျး အဆငျပွလောမယျထငျပါတယျ။ ဒါနဲ့ graphic ကလညျး ok ပါ။ အိမျပွငျဆငျရာမှာလညျး control အတျောလေး အဆငျပွပေါတယျ။ တဈခုပဲ …. freemium ဆိုတာမမပေ့ါနဲ့။
တဈခြို့ကတော့ 2015 July လောကျကတညျးက ဆော့ဖွဈထားတဲ့ ဂိမျးတဈခုဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အဲ့တုနျးကတော့ တဈခြို့နရောတှမှောမရနိုငျသေးပါဘူး။ ကောငျးတဲ့ အခကျြကတော့ cross-platform ဖွဈပါတယျ။ ဘယျသှားသှားဆော့လို့ရနမှောပါ။ PC steam မှာရော mobile မှာရောရနိုငျပါတယျ။ ဇာတျလမျးကတော့ villager တဈယောကျအဖွဈနဲ့ အကောငျတှမှေေး အပငျတှစေိုကျနလေညျးရပွီးတော့ နောကျတဈဘဝကတော့ hero တဈယောကျအဖွဈ monster တှနေဲ့ခုတျထဈနရေမှာပါ။ ဒီလိုပုံစံတူဂိမျးတှကေ အခုမှရှိခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။ 2011 လောကျကတညျးက MMO တှမှော တဈခွားနာမညျတှနေဲ့ အမြားကွီးရှိခဲ့ပါတယျ။ သိပျမအောငျမွငျပဲ ရပျသှားကွတာမြားလို့ သတိမထားမိတာဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒါမှမဟုတျ server ကဝေးတဲ့အတှကျ မဆော့ဖွဈတာလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီလို fantasy MMO တှထေဲမှာတော့ development circle အဆငျပွတေဲ့ဂိမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ free to play ဖွဈပါတယျ။ mount, armor နဲ့ တဈခွားပစ်စညျးတှအေမြားကွီးကို crown နဲ့ဝယျလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ MMO တဈခုအနနေဲ့တော့ crown ဝယျရတဲ့ဈေးက မြားနတေယျလို့ထငျပါတယျ။
စောငျ့ရကွိုးနပျတဲ့ ဂိမျးတှထေဲမှာတော့ Siege of Dragonspear ပါမယျထငျပါတယျ။ Beamdog ကထုတျတဲ့ Balduer’s Gate series တှထေဲမှာ တဈခုမှစိတျပကျြစရာမပါပါဘူး။ အခုဆိုရငျ PC ရော mobile device တှမှောပါရလာတဲ့အခါ အခြိနျနရောမရှေး save game ရနပေါပွီ။ $10 နဲ့ 2.6GB+ ဆိုပမေယျ့ cross-platform ရတဲ့ RPG ကောငျးတဈခုအတှကျကတော့ တနျပါတယျ။
Xigma game ကထုတျလိုကျတဲ့ ဒီဂိမျးက ယှဉျပွောလို့ရတဲ့ ဂိမျးတှအေမြားကွီးပဲ။ Alto’s Adventure, Monument Valley, and Prune ဒါတှကေတူတယျတော့မဟုတျဘူး။ တကယျကစားကွညျ့တဲ့ အခါသိလာပါလိမျ့မယျ။ survival နဲ့ construction တှဲထားတဲ့ဂိမျးတှထေဲမှာတော့ ငွိမျဆေးမိထားတဲ့ အတိုငျးဆော့ဖွဈနမေယျ့ဂိမျးတှထေဲကတဈခုပါ။ $4 နဲ့ MB နညျးနညျးပဲဆိုတော့ အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ ပစ်စညျးပေါငျး သောငျးခွောကျထောငျကို စုပွီး ကိုယျတိုငျ အလုပျလုပျမလား အကောငျတှကေို သခြော assign လုပျမလားက hi-score ရဖို့ နညျးတှထှေကျလာပါလိမျ့မယျ။ Steam မှာလညျးရပါတယျ။ PC platform အတှကျပေါ့။ Android အတှကျတော့ မတှဘေူ့း။
Gacha game လို့ပဲပွောရမှာပေါ့။ Social RPG ဆိုလညျးမမှားပါဘူး။ Square Enix နဲ့ Nintendo တို့လိုအကိတျတှရေဲ့ SRPG တှခေတျေထလာတဲ့အခြိနျဆိုတော့ ဂိမျးအသဈတှေ ကိုဆော့ဖွဈဖို့နဲ့ တိုးဝငျဖို့ဆိုတာ အတျောလေးခကျလာမယျထငျပါတယျ။ dev တှဘေကျကကွညျ့ရငျးပွောတာပါ။ ဒီတဈခုက idea အသဈတှနေဲ့ပွညျ့နတောလားဆိုတော့ မဟုတျပါဘူး။ သူလိုငါလိုပါပဲ။ graphic လညျး ခုအခြိနျမှာဒီလောကျတော့ ရှိသငျ့ပါပွီ။ Storyline ကတော့ တကယျရေးထားတယျလို့ထငျရပမေယျ့ မကျြစိနောကျအောငျလုပျထားတော့ နညျးနညျးကွာလာတဲ့အခါ next ပဲနှိပျဖို့ကွိုးစားမိလာတာတော့အမှနျပဲ။ Single-player campaign တှတေကျလာတာနဲ့အမြှ တဈခွား game mode တှထေပျပှငျ့လာပါလိမျ့မယျ။ PvP ရှိတယျ။ ခတျေထနတေဲ့ copy character လညျးပါပါတယျ။ energy, evolve, draw, box ဆိုတဲ့ gacha game တှရေဲ့ကိစ်စ အကုနျတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ f2p ဆိုတော့ အခြိနျရရငျတော့ စမျးကွညျ့ပေါ့ဗြာ၊ အမြားစုလညျး သိပျခရီးမရောကျကွသေးပါဘူး။
Tags android iOS mmorpg mobile Survival weekly